Iibso DIY Silikoon Gacan -ku -samaysan oo Qaab -dhismeed Saabuun ah - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Nambarka Tusaalaha: 32131
Style: Qaab Saabuun ah
Dulucda: caaryada saabuunta
Cabbirka: 22.2 * 20.5 * 2.5 cm
Waxyaabaha: silikoon heer cunto ah
Awoodda daloolka keli ah: 100 ml
6 Cave Rectangle Silicone caaryada Samaynta Saabuunta
Qalab: Silikoon Heerarka Cuntada. Qalabka ugu fiican ee badeecadaha la xiriiri doona cuntada.
Tilmaam: Silikoonku waa mid dabacsan oo aan dheg lahayn, Qaabku waa dib loo isticmaali karaa. Waa la dhaqay ka dib marka la isticmaalo si fiicanna u ilaali. Weelka dhaqa waa la heli karaa.
Cadhada heerkulka: -40 ilaa 230 digrii. Wuxuu ku jiri karaa Qaboojiyaha iyo foornada
In ka sii badan ayaa loo mahadcelinayaa woopshop, bakhti ayaa si dhakhso leh u yimid !!!!!!!!!!! Markaa qabso !!!!!
Silikoon wanaagsan. Sida! Bixinta degdegga ah
Alaabtu waxay timid waqtigii loogu talagalay. Badeecadu waxay u dhigantaa tilmaanta. Alaabo tayo fiican leh. Waxaan dhigay dhammaan 5 xiddigood. Waxaan kula talinayaa dukaanka iyo badeecadan dhammaan iibsadayaasha.
Runtii AD, wax cajiib ah, ku taliya Ótima qualidade e fiel ao anúncio, recomendo